Daawo:- Atariishada Bollywood Sonam Kapoor Oo Dib U Xusuusatay Xilligii Akshay & Raveena Ay Sababta U Noqdeen In Naasaha Laga Taabto - Hablaha Media Network
Daawo:- Atariishada Bollywood Sonam Kapoor Oo Dib U Xusuusatay Xilligii Akshay & Raveena Ay Sababta U Noqdeen In Naasaha Laga Taabto
HMN:- Sonam Kapoor malaha caan ayey ka tahay Bollwyood Town, laakiin waxay la wadaagtaa adduunka waxyaabaha xanuunka badan ee kusoo dhacay caruurnimadeedii.
31 sanno jirtaan uu dhalay halyeeyga Bollywood Anil Kapoor ayaa markasta dhiirigelisa jiilka dhallinyarada ah, Sonam Kapoor ayaana haatan saxaafadda la wadaagtay dhacdo xanuun badan oo weerar galmo ah oo lagu soo qaaday iyadoo dhallinyaro ah.
Atariishadaan ayaa waxay la hadashay barnaamijka Roundable 2016 ee uu daadihiyaha ka yahay Rajeev Masand, waxa ugu yaabka badan ee ay ka hadashay atariishadaan ayaana ahaa inay ka sheekeysay waqtigii iyadoo aad u dhallinyar uu nin naaska ka taabtay.
Sonam Kapoor ayaa tiri: “Shaqsi kasta waa uu soo maray xilli weerar galmo lagu soo qaaday marka caruurnimadiisii laga hadlayo. Waxaan xusuustaa in weerar galmo la igu soo qaaday markii aan dhallinyarada ahaa. Waxay igu noqotay lama filaan. Waxaan xusuustaa in aanan ka sheekeyn arrintaan laba ama seddax sanno ka dib.
“Si cad ayaan u xusuustaa dhacdadaan. Waxaan u socday inaan daawado filim ay isla wadaan Raveena Tandon iyo Akshay Kumar waxaan tiyaatarka Gaiety Galaxy Theatre la aaday asxaabteyda. Waxaan aheyn hablo u dhexeeya 13 illaa 14 sanno jir.
“Waxaan dooneynay inaan sambuus kasoo iibsanno bannaanka shaneemada waxaan aheyn gabdho mooryaanta oo kale ah, waad garaneysaa hablo shaneemo isugu yimad waxaan isheysanaa garbaha waana lugeyneynaa.
“Waxaan ahaa shaqsiga ugu dambeeya ugu dambeeya meesha sababtoo ah sida iska cad aniga ayaa ugu dheeraa waxaana ahaa shaqsiga aan garabka la heysan balse isagu garbaha heystay gabdhaha kale.
“Waxayna aheyd dhalashada saaxiibteey Ekta. Si cad ayaan wax kast u xusuustaa. Waan lugeyneynay. Nin ayaa ka yimid gadaasheyda ka dibna wuxuu igu dhegay naasaha. Sida iska cad markaas naaso muuqda ma aanan laheyn. Waxaanse bilaabay inaan iska fujiyo ka dibna markii aan iska fujiyey halkii ayaan ku ooyey. Kama hadln wixii igu dhacay. Daawashada filimka ayaan dhammeystay sababtoo ah maba u heysan in wax qalad ah la igu sameeyey muddo dheer ka dib ayaanse ogaaday.”
Sonam qalbigeeda waxba kuma reeban, laakiin markasta dhibaatooyinkaan oo kale ayaa soo maraya hablaha dhallinyarada marka la yahay.